ब्लड प्रेसरका विरामीले हस्तमैथुन गर्नु हुँदैन ? ब्लड प्रेसर र हस्तमेथुनबीच के सम्बन्ध छ ? – Nepal News
ब्लड प्रेसरका विरामीले हस्तमैथुन गर्नु हुँदैन ? ब्लड प्रेसर र हस्तमेथुनबीच के सम्बन्ध छ ?
हस्तमैथुनलाई स्वस्त यौनजीवनका एक भाग मानिन्छ । तर उच्चरक्त चापले तपाईलाइृ हस्तमैथुन गर्न रोक्न सक्छ् ? के तपाईलाई लाग्छ उच्चरक्त चाँपमा हस्तमैथुन गर्नाले कुनै समस्या हुन सक्छ ? हामीहरु तपाईलाई जानकारी गराउदै छौं कि हस्तमैथुन र उच्चरक्त चापमा के सम्बन्ध छ ?
हस्तमैथुन गर्दा ब्‍लड प्रेशर बढ्छ
स्वस्थ व्यक्तिले जब हस्तमैथुन गरेर शुक्रकीट स्खलित हुन्छ त्यति खेर ब्‍लड प्रेशर बढ्छ । जब तपाई सेक्‍स वा हस्तमेथुन गर्नु हून्छ त्यति बेला शरीरमा उत्सर्जन हुने र तनावका बेला उत्सर्जन हुने हार्मोन एउटै हो । यही हार्मोनका कारण हस्तमैथुन या सेक्सका क्रममा तपाईको मृटुमने धड्कन र ब्‍लड प्रेशर बढ्छ । स्खलित भएको १० मिनेटसम्म ब्‍लड प्रेशर बदिरहन्छ ।
हस्तमैथुन ब्‍लड प्रेशरको एउटा कारण हो ?
हस्तमैथुनलाई ब्‍लड प्रेशरको कारण मान्न सकिदैन । यधपि हस्तमैथुन गर्नाले ब्‍लड प्रेशर केही पक्कै बढ्छ । तर हसतमैथुन ब्‍लड प्रेशरको प्रमुख कारण भने होइन । यदि तपाईलाई हाइपरटेन्शन या ब्‍लड प्रेशरको समस्या छ भने हस्तमैथुन नगर्नु राम्रो ।
तपाईलाई हाइपरटेन्शनको बारेमा जानकारी छैन भने
यदि तपाईलाई हाइपरटेन्शनको समस्या र यसबारेमा कुनै जानकारी छैन भने तपाई उच्च् जोखिममा हुनुहुन्छ । यदि यसो भयो भने कार्डियक अरेस्‍ट, स्‍ट्रोक, हृदयघात फिर भास्कुलर अट्याक हुन सक्छ ।
तपाईका लागि के राम्रो
खैर, माथिका उल्लिखित कुराहरुबाट डराउनु पर्ने केही कारण छैन । हस्तमैथुनका क्रममा हृदयघात हुने जस्ता घटना अपवाद हुन । डराउनु भन्दा तपाई दैनिक जीवनमा शारीरिक व्यायामका कुनै गतिविधि गर्नु र भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित दजोखिम कम गर्नुहोस् ।
ट्याग्स: ब्लड प्रेसर, हस्तमैथन